Tag: kushambadzira kwekutengesa | Martech Zone
Tag: kushambadzira kwekutengesa
Swirl: In-Chitoro Yekushambadzira Yepuratifomu yeVakuru Vatengesi
Mugovera, Mbudzi 2, 2013 Mugovera, Mbudzi 2, 2013 Douglas Karr
Swirl In-Store Mobile Marketing Platform ™ ndiyo chikuva chekutanga kurega vatengesi vakuru kuti vagadzire uye vaunze zvemukati zvemukati uye zvinopihwa kune vatengi zvichibva nenzvimbo dzavari mukati mezvitoro zvepanyama. Iyo Swirl chikuva inopa yekupedzisira-kumagumo mhinduro kune vatengesi kuti vatore inoshanda mishandirapamwe inotaurirana nevatengi vavo kuburikidza nenharembozha chero kupi kubva padanho renharaunda, nzira yese kusvika kune imwe nzvimbo yechitoro. MunaMay, Swirl akatanga mutyairi wendege
Mobile Kushambadzira muRetail Indasitiri
Chipiri, Gunyana 22, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Nharembozha nekutengesa zvinoramba zvichipa mukana wevatengesi kuvandudza kukosha kwevatengi uye kuwedzera kutendeka - pakupedzisira kutyaira kutengesa. Maitiro akareruka sekutumira mameseji eSMS ane akanyanya maitiro ekupindura. Mimwe mhinduro dzepamberi senge mafoni ekushandisa anokwanisa kusimudzira ruzivo rwekutenga kune vatengi Dynmark ndeyeUK-yakavakirwa gore nhare mbozha uye kambani yekutumira mameseji. Vakaisa pamwechete iyi infographic iyo inopa mamwe manhamba akasimba ekutsigira ako ekutengesa ekushambadzira kuedza kuburikidza nekushandisa